1 Ndị Kọrịnt 10:13​—⁠Chineke Ọ̀ Na-ebu Ụzọ Ekpebi Ọnwụnwa Ndị Ga-abịara Anyị?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Pọl onyeozi kwuru na Jehova ‘agaghị ekwe ka a nwaa anyị gabiga ihe anyị pụrụ idi.’ (1 Kọr. 10:13) Ọ̀ pụtara na Jehova na-ebu ụzọ elebara ọnwụnwa ndị anyị ga-edili anya, jirizie ya kpebie nke ga-abịara anyị?
Chegodị otú ọ ga-adị ma ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu. Otu nwanna nwa ya nwoke gburu onwe ya jụrụ, sị: ‘Jehova ò bu ụzọ lechaa ihe ga-eme, kpebie na mụ na nwunye m ga-edili ihe a nwa anyị nwoke mere?’ Ànyị kwesịrị iche na Jehova na-esi otú ahụ ahazi ihe ọ bụla na-eme ná ndụ anyị?
Anyị lebakwuo anya n’ihe Pọl kwuru ná 1 Ndị Kọrịnt 10:13, anyị ga-aghọta na e nweghị ihe Baịbụl kwuru kwesịrị ime ka anyị chee na Jehova na-ebu ụzọ elebara ọnwụnwa anyị ga-edili anya, jirizie ya kpebie nke ga-abịara anyị. Ka anyị tụlee ihe anọ mere anyị nwere ike iji kwuo otú ahụ.
Nke mbụ bụ na Jehova hapụrụ ụmụ mmadụ ka ha na-ekpebi ihe ha ga-eme. Ọ chọrọ ka anyị jiri aka anyị na-ekpebi ihe ndị anyị na-eme. (Diut. 30:19, 20; Jọsh. 24:15) Anyị kpebie ime ihe dị mma, anyị nwere ike ịtụkwasị Jehova obi ka o duzie anyị. (Ilu 16:9) Ma, anyị kpebie ime ihe na-adịghị mma, anyị ga-eji isi anyị buru ihe anyị metere. (Gal. 6:7) A sị na Jehova na-ahọrọ ọnwụnwa ndị ga-abịara anyị, ọ̀ bụ na ọ gaghị apụta na ọ hapụghịzi anyị ka anyị na-ekpebi ihe anyị ga-eme?
Nke abụọ bụ na Jehova anaghị eme ka “oge ọdachi na ihe a na-atụghị anya ya” ghara ịbịara anyị. (Ekli. 9:11) Anyị nwere ike nwee ihe mberede ga-eme ka anyị taa ahụhụ n’ihi na anyị nọ n’ebe na-ekwesịghị ekwesị n’oge na-ekwesịghị ekwesị. Jizọs kwuru banyere otu ihe mberede mere ka mmadụ iri na asatọ nwụọ mgbe ụlọ elu dagidere ha. O kwuru ihe gosiri na ihe mberede ahụ abụghị uche Chineke. (Luk 13:1-5) Ànyị kwesịrị iche na tupu ọdachi emee, Chineke na-ebu ụzọ kpebie onye ga-anwụ na onye na-agaghị anwụ?
Nke atọ bụ na onye ọ bụla n’ime anyị kwesịrị iji obi ya niile na-efe Jehova. Cheta na Setan sịrị na ndị niile na-efe Jehova ejighị obi ha na-efe ya. O kwuru na anyị agaghị erubere Jehova isi ma ọnwụnwa bịara anyị. (Job 1:9-11; 2:4; Mkpu. 12:10) A sị na Jehova na-eme ka ọnwụnwa ụfọdụ ghara ịbịara anyị n’ihi na ọ hụrụ na anyị agaghị edili ha, ọ̀ bụ na ọ gaghị eme ka ihe Setan kwuru yie eziokwu, ya bụ na anyị na-efe Chineke n’ihi ihe anyị na-enweta n’aka ya?
Nke anọ bụ na Jehova anaghị achọ ịmata ihe niile ga-eme anyị n’ọdịnihu. Ichewe na Chineke na-ahọrọ ọnwụnwa ndị ga-abịara anyị na-egosi na ọ ma ihe niile gbasara ọdịnihu anyị. Ma, iche otú ahụ adabaghị n’ihe Baịbụl kwuru. Chineke nwere ike ịma ihe ga-eme n’ọdịnihu. (Aịza. 46:10) Ma, ihe Baịbụl kwuru gosiri na Jehova na-ahọrọ ihe ndị ọ chọrọ ịma ga-eme n’ọdịnihu. (Jen. 18:20, 21; 22:12) N’ihi ya, ọ naghị eji ikike o nwere ịmata ihe ga-eme n’ọdịnihu egbochi anyị iji aka anyị kpebie ihe anyị ga-eme. Ọ́ bụghị ihe anyị kwesịrị ịtụ anya ka Chineke mee, ebe ọ bụ na ọ na-eme ihe ziri ezi mgbe niile, hapụkwa anyị ka anyị na-ekpebi ihe anyị ga-eme?—Diut. 32:4; 2 Kọr. 3:17.
Ma, gịnịzi ka anyị kwesịrị ịghọta n’ihe ahụ Pọl kwuru, nke bụ́ na ‘Chineke agaghị ekwe ka a nwaa anyị gabiga ihe anyị pụrụ idi’? Pọl na-akọwa ihe Jehova na-eme mgbe ọnwụnwa bịaara anyị, ọ bụghị tupu ọnwụnwa abịara anyị. Ihe ahụ o kwuru na-emesi anyị obi ike na Jehova ga-enyere anyị aka ma anyị tụkwasị ya obi n’agbanyeghị ọnwụnwa ọ bụla bịaara anyị. (Ọma 55:22) Ka anyị tụlee ihe abụọ mere Pọl ji kwuo otú ahụ.
Nke mbụ bụ na ọnwụnwa ndị na-abịara anyị bụ ndị “na-abịara ụmụ mmadụ.” N’ihi ya, ọnwụnwa ndị na-abịara anyị abụghị ihe ọhụrụ. Ma, ọnwụnwa ndị ahụ abụghị ndị anyị na-agaghị edili ma ọ bụrụhaala na anyị atụkwasị Chineke obi. (1 Pita 5:8, 9) N’amaokwu ndị bu 1 Ndị Kọrịnt 10:13 ụzọ, Pọl kwuru banyere ọnwụnwa ndị bịaara ndị Izrel n’ala ịkpa. (1 Kọr. 10:6-11) O nweghị nke bụ́ ihe mmadụ na-ahụtụbeghị ma ọ bụ nke ndị Izrel kwesịrị ntụkwasị obi na-agaghị edili. Pọl kwuru ugboro anọ na “ụfọdụ n’ime ha” nupụụrụ Jehova isi. Ọ dị mwute na ụfọdụ ndị Izrel mere ihe ọjọọ na-agụ ha agụụ n’ihi na ha atụkwasịghị Chineke obi.
Nke abụọ bụ na “Chineke kwesịrị ntụkwasị obi.” Ihe Baịbụl kwuru gbasara otú Chineke si mesoo ndị ya gosiri na ọ bụ “ndị hụrụ ya n’anya na ndị na-edebe ihe o nyere n’iwu” ka ọ na-enyere aka. (Diut. 7:9) O gosikwara na Chineke na-emezu nkwa ọ bụla o kwere. (Jọsh. 23:14) Otú o si mezuo ihe ndị o kwuru n’oge gara aga kwesịrị ime ka obi sie ndị hụrụ ya n’anya ma na-erubere ya isi ike na ọ ga-emezu nkwa abụọ a o kwere gbasara ọnwụnwa ndị nwere ike ịbịara ha: Nke mbụ, ọ gaghị ekwe ka ọnwụnwa ọ bụla bịaara ha sie ike nke na ha agaghị edili ya. Nke abụọ, ‘ọ ga-emere ha ụzọ mgbapụ.’
Jehova “na-akasi anyị obi ná mkpagbu anyị niile”
Olee otú Jehova si emere ndị tụkwasịrị ya obi ụzọ mgbapụ mgbe ọnwụnwa bịaara ha? N’eziokwu, ọ bụrụ na ọ bụ uche ya, o nwere ike iwepụrụ ha ọnwụnwa ahụ. Ma, cheta na Pọl kwuru banyere Jehova, sị: “Ọ ga-emere unu ụzọ mgbapụ, ka unu wee nwee ike idi ya.” Ma, ọtụtụ mgbe, otú o si emere anyị “ụzọ mgbapụ” bụ inye anyị ihe ga-eme ka anyị nwee ike idi ọnwụnwa bịaara anyị. Ka anyị tụlee ụzọ ụfọdụ Jehova nwere ike isi meere anyị ụzọ mgbapụ:
Ọ “na-akasi anyị obi ná mkpagbu anyị niile.” (2 Kọr. 1:3, 4) Jehova nwere ike iji Okwu ya, mmụọ nsọ ya, na ihe ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi na-ewepụtara anyị mee ka obi ruo anyị ala.—Mat. 24:45; Jọn 14:16; Rom 15:4.
O nwere ike iji mmụọ nsọ ya duzie anyị. (Jọn 14:26) Mgbe ọnwụnwa bịaara anyị, mmụọ nsọ nwere ike nyere anyị aka icheta ihe e kwuru na Baịbụl na akụkọ ndị a kọrọ na ya ga-eme ka anyị mata ihe anyị kwesịrị ime.
O nwere ike iji ndị mmụọ ozi ya nyere anyị aka.—Hib. 1:14.
O nwere ike iji okwu ụmụnna anyị gwara anyị na ihe ndị ha meere anyị mee ka anyị “dị ike.”—Kọl. 4:11.
N’ihi ya, gịnị ka anyị mụtara n’ihe Pọl kwuru ná 1 Ndị Kọrịnt 10:13? Anyị amụtala na Jehova anaghị ahọrọ ọnwụnwa ndị ga-abịara anyị. Ma mgbe ọnwụnwa bịaara anyị, obi kwesịrị isi anyị ike na anyị tụkwasị Jehova obi anyị niile, ọ gaghị ekwe ka ọnwụnwa ahụ karịa anyị. Ọ ga-emere anyị ụzọ mgbapụ ka anyị nwee ike idi ya. Ihe ndị a na-eme ka obi sie anyị ezigbo ike.